Usekhumbule uLepasa noMabasa umqeqeshi wePirates ehlulwa ukushaya amagoli - Impempe
Usekhumbule uLepasa noMabasa umqeqeshi wePirates ehlulwa ukushaya amagoli
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer usevumile ukuthi ukungabi khona kwabagadli bakhe oZakhele Lepasa noTshegofatso Mabasa kulikhubazile kakhulu iqembu lakhe. Laba bagadli abayiqale kahle isizini bengalibheki ipali, basalimele okwamanje osekwenze iBucs yasala noGabadinho Mhango kuphela kubagadli, kanti kwayena akaluleme ngokugcwele. Lokhu sekuphoqe uZinnbauer ukuthi asebenzise oVincent Pule noTerrence Dzvukamanja njengabagadli emidlalweni embalwa edlule.
“ULepasa noMabasa yibona bantu esibadingayo njengamanje,” kuvuma uZinnbauer ngemuva komdlalo wabo neLamontville Golden Arrows ophele ngo 0-0 phakathi nesonto. “U(Jean-Marc) Mundele akakabi nathi eqenjini isikhathi eside, yikhathi esafunda ngeqembu, futhi sisamfida ngolwazi nendlela esidlala ngayo. Ngaphambi kokuba eze lapha ubengadlali ngenxa yokuthi wayelimele isikhathi eside, ngakho usadinga nokunakekelwa ukuze agcine efike esimweni esifanele sokudlala. Udinga isikhathi.
“Sinabo abanye abadlali kodwa badinga ukuphathwa ngendlela efanele. Sinemidlalo njalo ngemuva kwezinsuku ezimbili kanti ngokujwayelekile ngabe sinika abanye abadlali isikhathi sokuphumula, kodwa ke nakhu sidinga imiphumela ngakho kumele uzame ukubhalansisa izibalo. Kwesinye isikhathi omunye umdlali umdlalisa noma engaluleme ngokugcwele,” kuqhuba uZinnbauer.
Lo mqeqeshi odabuka eGermany ubuye wavikela nomdlali wasesiswini abalandeli abangasayizwa kahle indaba yakhe, uFortune Makaringe.
“UFortune ngumdlali okwazi ukubamba umgqigqo ofanayo imizuzu engu-90, njengoBen (Motswari), njengamanje siyabadinga abadlali abanjalo. Uyibonile iphasi ayishayele u(Deon) Hotto… (uHotto washaya igoli kodwa kwasho ukuthi wayesesendaweni engamfanele), maningi amathuba asakhela wona kanti uyakwazi nokungena ezikhaleni ezimbeka ithuba lokushaya amagoli.
“Ungumdlali ozinikelayo futhi odlala ezindaweni ezehlukene ngakho ubalulekile kithi. Futhi uhlale ewumqemane kanti akanazinkinga zokulimala. Ungumdlali omuhle futhi ngijabule ukuba naye eqenjini lami. Esimweni esijwayelekile besizobuye simphumuze, kodwa njemanje siyamdinga enkundleni.”
Previous Previous post: Abaneme abagijimi ngokuhlehliswa kwemiqhudelwano nemijaho yi-ASA
Next Next post: Uthi sekusele kubagadli ukuthi benze owabo umsebenzi unozinti woSuthu